Flashing Roller Factory - Mpanamboatra Rolling Rolling Wholesale, Mpamatsy
Basy fanorana hozatra
Scooter ho an'ny olon-dehibe
Scooter amin'ny valizy
Flashing Roller JB121311
Fametahana: PA Plastika, iray habe mifanaraka amin'ny rehetra, ny habe mety ho azo ovaina. Kodiarana: kodiarana PU 82A misy jiro manjelanjelatra 4-Front, habe: 72 * 24mm Bearing: vy vy haingam-pandeha ABEC-5 Fitaovana: Takelaka vy misy chrome voahodina, tsy harafesina velively. Fonosana: boaty fanomezana, tsiroaroa / ctn 20 (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / Pairs: $ 5.20 Fehin-kiraro: fitaovana vaovao, loko mamirapiratra, tanjaka avo lenta, fitaovana malefaka tsara Wheel: PVC, miaraka amin'ny elastika sy ny fanoherana entina Mitondra: vy mitondra, malama ary tsy misy resis ...
Fametahana: PA Plastika, iray habe mifanaraka amin'ny rehetra, ny habe mety ho azo ovaina. Kodiarana: kodiarana PU 82A misy jiro manjelanjelatra 4-lafiny, habe: 72 * 24mm mitondra: vy vy haingam-pandeha ABEC-5 Fitaovana: Takelaka vy miaraka amina chrome nohazavaina, tsy harafesina velively. Fonosana: boaty fanomezana, tsiroaroa / ctn 20 (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / Pairs: $ 5.60 Endri-javatra misy kodiarana: 1. Kodiarana mikorisa, visy afovoany azo antoka hanamboarana ny habeny 2. Kodiarana malefaka kely sy maivana, mora entina, azo apetraka amin'ny kiraro fisaka araka izay itiavany ...
Flashing Roller JB132312
Fametahana: plastika PP, iray habe mifanaraka amin'ny rehetra, mety azo ovaina ny habeny. Kodiarana: kodiarana PU 82A misy jiro manjelanjelatra 3-Front, habe: 72 * 24mm mitondra: vy vy haingam-pandeha ABEC-5 Fitaovana: Takelaka vy misy zinc mainty voahodina, tsy harafesina velively. Fonosana: boaty fanomezana, tsiroaroa / ctn 20 (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / Pairs: $ 4.60 Endri-javatra momba ny kodiarana: 1. Kodiarana mikorisa, visy afovoany azo antoka hanamboarana ny habeny 2. Kodiarana malefaka kely sy maivana, mora entina, azo apetraka amin'ny kiraro fisaka amin'ny ...
Fametahana: plastika PP, iray habe mifanaraka amin'ny rehetra, mety azo ovaina ny habeny. Kodiarana: kodiarana PU 82A misy jiro manjelanjelatra 3-Front, habe: 70 * 24mm mitondra: vy vy haingam-pandeha ABEC-5 Fitaovana: Takelaka vy misy zinc Blue voahodina, tsy harafesina velively. Fonosana: boaty fanomezana, tsiroaroa / ctn 20 (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / Pairs: $ 4.80 Fehin-kiraro: fitaovana vaovao, loko mamirapiratra, tanjaka avo, malefaka tsara; Fitaovana kodiarana: PVC, miaraka amin'ny elastika sy ny fanoherana; Mitondra: vy mitondra, malama ary tsy ...
Flashing Roller JB161311
Fametahana: PA Plastika, iray habe mifanaraka amin'ny rehetra, ny habe mety ho azo ovaina. Kodiarana: kodiarana PU 82A tsy misy jiro manjelanjelatra LED, habe: 72 * 24mm Mitondra: vy vy haingam-pandeha ABEC-5 Fitaovana: Takelaka vy misy chrome voahodina, tsy harafesina velively. Fonosana: boaty fanomezana, tsiroaroa / ctn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / Pairs: $ 4.60. Sliding Wheel Features: 1.Smooth kodiarana Safidy tsara amin'ny fitaovana, fomba lamaody ary endrika mahira-tsaina. Izy ireo dia azo hanaovana amin'ny kiraro rehetra. Ny kodiarana dia miovaova sy hazo fisaka ...
Flashing Roller JB152313
Ampidiro: plastika PP, iray habe mifanaraka amin'ny rehetra, ny habe mety azo ovaina: Kodiarana pvc misy jiro manjelanjelatra 3-Front, habe: 70 * 24mm Bearing: vy vy haingam-pandeha ABEC-5 Fitaovana: Takelaka vy misy zinc Blue voahodina, tsy harafesina mihitsy. Fonosana: boaty fanomezana, tsiroaroa / ctn 20 (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / Pairs: $ 4.20 Fehin-kiraro: fitaovana vaovao, loko mamirapiratra, tanjaka avo lenta, fitaovana malefaka tsara: PVC, miaraka amin'ny elastika sy ny fanoherana entina Mitondra: vy mitondra, malama ary tsy misy fanoherana ...
Flashing Roller JB152323
Fametahana: plastika PP, iray habe mifanaraka amin'ny rehetra, mety azo ovaina ny habeny. Kodiarana: kodiarana PVC misy jiro manjelanjelatra 3-Front, habe: 70 * 24mm Bearing: haingam-pandeha 608ZZ Fitaovana: Takelaka vy misy zinc Blue voahodina, tsy harafesina velively. Fonosana: boaty fanomezana, tsiroaroa / ctn 20 (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / Pairs: $ 3.60 Fomba fitaterana taxi: 1. Rehefa vita ny fiomanana teo aloha dia atombohy ny fivezivezena, apetraho eo amin'ny faran'ny alohan'ny tongony ny tongotrao , apetraho amin'ny lafiny mifanitsy ny roa tonta, atsangano amin'ny 7-8cm ny rantsan-tongony eo alohan'ny ...
Fonosana: PP, plastika, iray habe mifanaraka amin'ny rehetra, ny habe mety ho azo ovaina kodiarana PVC tsy misy jiro, habe: 72 * 24mm Mitondra: haingam-pandeha 608ZZ Fitaovana: Takelaka vy misy zinc manga voahodina, tsy harafesina mihintsy fonosana: boaty fanomezana, tsiroaroa 20 / CTn (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / Pairs: $ 2.20 Fehin-kiraro: fitaovana vaovao, loko mamirapiratra, tanjaka avo, mora miovaova; Fitaovana kodiarana: PVC, miaraka amin'ny elastika sy ny fanoherana; Mitondra: vy mitondra, malama ary tsy misy fanoherana Loko: mainty, manga, mavokely, mahafaly ...
Flashing Roller JB132411
PP Plastika, iray habe mifanaraka amin'ny rehetra, ny habe mety ho azo ovaina: Kodiarana pvc miaraka amin'ny 3 taratra jiro taratra, habe: 72 * 24mm 3.Bearing: vy vy haingam-pandeha ABEC-5 vy vy vita amin'ny chrome, tsy harafesina velively. Fonosana: boaty fanomezana, tsiroaroa / ctn 20 (52 * 39 * 22.5cm / 17kg) FOB Ningbo / Pairs: $ 4.80 Asan'ny kodia mikorisa: 1. Kodiarana mikorisa, visy afovoany azo antoka hanamboarana ny habeny 2. Kodiarana malefaka kely sy maivana, mora entina, azo apetraka amin'ny kiraro fisaka araka izay itiavany azy, mivory ary manala malalaka. 3 ....
“Mandeha mankany Xiandu sy Sacrificin ...
Orinasa iray alina no manampy an'i Thousan folo ...
Tanora sy Chil faha-33 an'i Jinyun County ...
No1 Juxian RD, Huzhen Lijin Industrial Zoon, Town Huzhen, Jinyu Zhejiang, Sina